VOA News, 18April 2013 —- မြန်မာနိုင်ငံက အဓိက နိုင်ငံရေးပါတီကြီး တခုဖြစ်တဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံ ခရီးစဉ် အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အကူအညီပေးဖို့ ဂျပန်အစိုးရက ကတိပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကတော့ နှစ်ပေါင်း ၃၀ နီးပါးမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် သွားခဲ့တဲ့ ခရီးစဉ်အတွင်း ဂျပန်နိုင်ငံက အကူအညီတွေ၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေဟာ လူထုအကျိုးပြုတာမျိုး ဖြစ်စေချင်တဲ့ သဘောထားတွေ ကို ပြောဆိုခဲ့တာပါ။ ခရီးစဉ် အဆုံး မသတ်ခင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ခဲ့တဲ့ အကြောင်း ကိုတော့ ကိုအောင်လွင်ဦး က စုံစမ်းထား သမျှ [...]
တပ်မတော်နေ့အခမ်းအနား ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်တက် ရောက်
DVB TV News, 27March 2013 —- နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပတဲ့ ၆၈ နှစ်မြောက် တမ်မတော်နေ့ အခမ်းအနားကုို အမျိုးသားဒီမုိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန် ဥရောပခရီးစဉ် အဆုံးသတ်
VOA News, 7March 2013 —- သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ဟာ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံး အကြိမ် ဥရောပ ၅ နိုင်ငံခရီးစဉ်ကို ကြာသပတေးနေ့မှာ အဆုံးသတ်ပြီး အီတလီနိုင်ငံကနေ ပြန်လည်ထွက်ခွါသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ သမ္မတရဲ့ အီတလီခရီးစဉ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ချေးငွေဆိုင်ရာ ပြုပြင်မှု သဘောတူညီချက်တရပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကိုတော့ ဒေါ်ခင်မျိုးသက် ကပြောပြပေးမှာပါ။
SSPP နှင့် ဖြစ်ပွား ခဲ့သော တိုက်ပွဲ များသည် လက်အောက်ခံ ပြသနာဟု အစိုးရဆို
Posted by mmnewshub · LeaveaComment
ရွှေဟင်္သာသတင်းဌာန . ၁၃ရက်နေ့ မေလ ၂၀၁၃ —- အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် နောက်ထပ် တိုက်ခိုက် မှုများ မပြုလုပ် တော့ကြောင်း ရှမ်းပြည် တိုးတက်ရေး ပါတီအား ဂတိ ပေးခဲ့ သည်ဟု ယင်းဆွေးနွေး ပွဲကို တက်ရောက် ခဲ့သော မိုင်းရယ် မြို့နယ်ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် စိုင်းသီဟကျော်က ဆိုပါသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ငါးဆ တိုးတက်လာဟု သမ္မတ ပြောဆို
မန္တလေး (မဇ္ဈိမ) . ၁၃ရက်နေ့ မေလ ၂၀၁၃ — နိုင်ငံအတွင်း ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ယခုနှစ် မေလဆန်းပိုင်းအထိ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှု ငါးဆ တိုးတက်ခဲ့ကြောင်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် က မန္တလေးမြို့သို့ မေလ ၁၂ ရက်နေ့က ရောက်ရှိစဉ် ပြောကြားလိုက်သည်။
မုန်တိုင်းဘေးကူညီရန် ကုလနှင့် အန်ဂျီအိုများ ကြိုတင်ပြင်ဆင်
DVB News, 13May 2013 —- မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဘက်ကို မဟာစင်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း ခုရက်ပိုင်းအတွင်း ဝင်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ခန့်မှန်းချက်တွေ ထွက်ပေါ်နေတာကြောင့် ကုလသမဂ္ဂနဲ့ အန်ဂျီအိုတွေက မုန်တိုင်းဘေးဒဏ်ခံရရင် အကူအညီပေးနိုင်ဖို့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။
မဟာစင် မုန်တိုင်း လမ်းကြောင်း ပြောင်းမှာကို စောင့်ကြည့်နေ
BBC News, 13May 2013 —- မေလ ၁၃ ရက် တနင်္လာနေ့ ညနေ ၆ နာရီ က မိုးလေ ဝသ တိုင်းထွာ ချက်တွေ အရ ဘင်္ဂ္လား ပင်လယ်အော်မှာ ဖြစ်ပွား နေတဲ့ မဟာစင် မုန်းတိုင်း ဟာ ကိုကိုကျွန်းရဲ့ အနောက် တောင်ဘက် မိုင် ၄၃၀ ခန့်၊ ကျောက်ဖြူမြို့ အနောက် တောင်ဘက် မိုင် ၆၀ဝ ခန့်မှာရှိတဲ့ ပင်လယ်ပြင်ကို ဗဟိုပြု နေပါတယ်။
ကမ်းရိုးတန်း ဝင်ရောက်စဉ် မဟာဆန် အားပျော့ဖွယ်ရှိ
RFA News, 13May 2013 —- ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းကို တိုက်ခတ်လာမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားတဲ့ မဟာဆန် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဟာ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းကို ဝင်ရောက်တဲ့အခါ အားပျော့သွားဖွယ်ရှိကြောင်း မိုးလေ၀သပညာရှင် ဦးထွန်းလွင်က ခန့်မှန်းပြောဆိုပါတယ်။
ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ) . ၁၃ရက်နေ့ မေလ ၂၀၁၃ —- အဓိကရုဏ်းများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် မိတ္ထီလာမြို့တွင် သတ်မှတ်ရက် ပြည့်တော့မည်ဖြစ် သည့် ပုဒ်မ ၁၄၄ အား ဆက်လက် ထုတ်ပြန်ထားရန် သမ္မတ က လိုလားကြောင်း ၎င်း၏ သဝဏ်လွှာတွင် ဖော်ပြထားပြီး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၏ အတည်ပြုချက် တောင်းဆိုလိုက်သည်။
ဖာဂူဆန် Old Trafford ကို နှုတ်ဆက်
VOA News, 13May 2013 —- အင်္ဂလန်ပရီမီယာလိဂ် ဘောလုံးပွဲတွေမှာတော့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် နည်းပြကြီး ဆာအဲလက်စ်ဖာဂူဆန်ဟာ နည်းပြအဖြစ်နဲ့ အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ် ပရိသတ်တွေကို တနင်္ဂနွေနေ့က နှုတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
FA ဖလား Wigan အသင်းအနိုင်ရ
VOA News, 12May 2013 —- အက်ဖ်အေဖလား (The FA Cup) ဘောလုံးဖိုင်နယ် မှာ ၀ီဂန်အက်သလက်တစ် (Wigan Athletic) အသင်းက မန်ချက်စတာစီးတီး (Manchester City) ကို အနိုင်ရပြီး ချန်ပီယံဖြစ်သွားပါတယ်။ လန်ဒန်မြို့ ၀င်ဘလေ (Wembley) ကွင်းမှာ စနေနေ့က ကစားခဲ့ကြတာမှာ ၀ီဂန်က ၊ ဗိုလ်စွဲမယ်လို့ အများကထင်ကြေးပေးထားတဲ့ မန်စီးတီးကို ၁ ဂိုး ဂိုးမရှိ နဲ့ အနိုင်ရသွားတာပါ။
ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ပိုးသစ် စိုးရိမ်ရ
BBC News, 13May 2013 —- ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ပိုးသစ် တိုးပွားလာမှုကြောင့် လူလူချင်း ကူးတဲ့ အအေးမိ အဆုတ်ရောင် ရောဂါတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့က ဆိုပါတယ်။
VOA News, 13May 2013 —- ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Francis က သူပထဆုံးရွေးချယ်တဲ့ Roman Catholic သူတော်စင်တွေကို ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
BBG အသံလွှင့်ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်သစ် အိုဘားမားအဆိုပြုမည်
Posted by mmnewshub · 1 Comment
VOA News, 12May 2013 —- အမေရိကန်သမ္မတ ဘရက်ခ်အိုဘားမားက သံအမတ်ဟောင်း Ryan Crocker ကို အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ BBG အသံလွှင့်ဘုတ် အဖွဲ့ရဲ့ အကြီးအကဲအဖြစ် အဆိုပြုမယ်လို့ ကြေငြာလိုက်ပါတယ်။ BBG အသံလွှင့်ဘုတ်အဖွဲ့ဟာ ဗွီအိုအေ အပါအ၀င် တခြားအစိုးရက ထောက်ပံ့ပေးထား တဲ့ နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာ အဖွဲ့တွေကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်လေယာဉ်တင် သင်္ဘော တောင်ကိုရီးယား ရောက်
VOA News, 11May 2013 — တောင်ကိုရီးယားရေတပ်နဲ့ ၃ ရက်ကြာ ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်ဖို့အတွက် အမေရိကန်နျူကလီယားစွမ်းအင်သုံး USS Nimitz လေယာဉ်တင် စစ်သင်္ဘောကြီးဟာ ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ် အရှေ့တောင်ပိုင်းက ဘူစန်ဆိပ်ကမ်းကို ဒီနေ့ ဆိုက်ရောက်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြောက်ကိုရီးယား အနေနဲ့ ဒီပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကို အပြင်းအထန် တုန့်ပြန် နိုင်တယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
ပါကစ္စတန် ရွေးကောက်ပွဲ ဒေသတွင်း တုံ့ပြန်
BBC News, 12May 2013 —- မွတ်ဆလင် အဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင် နာဝပ်ဇ် ရှရစ်ဖ် ခေါင်းဆောင်ပြီး ဖွဲ့နိုင်ခြေ များတဲ့ ပါကစ္စတန် အစိုးရသစ် အပေါ် ဒေသတွင်း ခေါင်းဆောင်တွေက မျှော်လင့်ချက် တွေ ထားခဲ့ကြပါတယ်။
ပါကစ္စတန်မှာ မစ္စတာ ရှရစ်ဖ် အစိုးရဖွဲ့ဖို့ ပြင်ဆင်
BBC News, 12May 2013 — ပါကစ္စတန် နိုင်ငံမှာ ရွေးကောက်ပွဲတွေ အပြီး နောက်တနေ့ မှာတော့ အတိုက် အခံ မွတ်ဆလင် အဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင် နာဝက်ဇ် ရှာရစ်ဟာ အစိုးရသစ် တရပ် ဖွဲ့ဖို့ အတွက် သူ့ရဲ့ပါတီ ခေါင်းဆောင် ပိုင်းနဲ့ ဆွေးနွေး မှုတွေ ပြုလုပ် နေပါပြီ။
တူရကီ နယ်စပ် မြို့မှာ ကားဗုံးခွဲ တိုက်ခိုက်ခံရ
BBC News, 12May 2013 —- စနေနေ့ က ကားဗုံး ၂ လုံး ခွဲပြီး တိုက်ခိုက်တာ ခံရတဲ့ အတွက် ဆီးရီးယား နဲ့ နယ်စပ်ချင်း ထိ နေတဲ့ တူရကီ ဘက်ခြမ်း က ရေဟန်လီ မြို့မှာ လူပေါင်း အနည်းဆုံး ၄၃ ဦး သေဆုံး သွားပါတယ်။
တရုတ် ကျောက်မီးသွေးတွင်း ပေါက်ကွဲမှု ၂၇ ဦး သေဆုံး
VOA News, 12May 2013 —- တရုတ်နိုင်ငံမှာ ၂ ရက်အတွင်း ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် အသေအပျောက် အများဆုံး သတ္တုတွင်းပေါက်ကွဲမှု ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တာမို့ တရုတ် အာဏာပိုင်တွေ စုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြပါတယ်။
မောင်တောမြို့နယ် တွင် မုန်တိုင်း ကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့များ ကျေးရွာအလိုက်ဖွဲ့စည်း
နိရဉ္စရာသတင်းဌာန. ၁၃ရက်နေ့ မေလ ၂၀၁၃ —- ရခိုင်ပြည်နယ် အနောက်ဘက် မောင်တောမြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာများတွင် ယမန်နေ့က စတင်ပြီး မုန်တိုင်း ကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့များကို အာဏာပိုင်များမှ ဖွဲ့စည်းနေကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
မဟာဆန် ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းအပေါ် ရခိုင်ပြည်သူလူထု စိုးရိမ်မှု ပိုကဲလာ
စစ်တွေ(မဇ္ဈိမ). ၁၃ရက်နေ့ မေလ ၂၀၁၃ —- ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ ဖြတ်သန်းတိုက်ခတ်မည့် မဟာဆန် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း ကျရောက်မည့်နေ့ နီးလာသည်နှင့်အမျှ ရခိုင် တပြည်နယ်လုံးရှိ ဒေသခံများ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
မုန်တိုင်းဂယက်ကြောင့် ရခိုင်နှင့် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ရေကြောင်းခရီးစဉ်များ ရပ်နား
DVB News, 13May 2013 — ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း မဟာစင်ကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ အစိုးရ ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ခရီးစဉ်တွေကို မေ ၁၄၊ ၁၅နဲ့ ၁၆ ရက်နေ့တွေမှာ ရပ်နားထားမယ်လို့ ပြည်တွင်းရေကြောင်း တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောပါတယ်။
မဟာစင်မုန်တိုင်းအတွက် ဧရာဝတီတိုင်းတွင် ပြင်ဆင်
DVB News, 13May 2013 — မဟာစင် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဟာ လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းကို ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်နိုင်ဖွယ်ရှိတာကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရက ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
ဦးသိန်းစိန် လာမယ့် အပတ် အမေရိကန်သွားမယ်
BBC News, 13May 2013 — မြန်မာသမ္မတ ဦးသိန်းစိန် လာမယ့် သီတင်းပတ် အတွင်း အမေရိကကို ပထမဆုံး တရားဝင် ခရီး သွားဖို့ ရှိပြီး ဒီခရီးစဉ် အတွင်း ဝါရှင်တန်မှာ အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမား ၊ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးနဲ့ တခြား အဆင့်မြင့် နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင် တွေနဲ့ တွေ့ဆုံမယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
မုန်တိုင်းကို ရင်ဆိုင်ဖို့ ပြင်ထားပါတယ် – ဦးဝင်းမြိုင်
DVB News, 13May 2013 — ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကနေ မြောက်ဘက်ကို ရှေးရှုလာတဲ့ မဟာစင် အမည်ရှိတဲ့ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဟာ လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းကို ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်နိုင်ဖွယ်ရှိတာကြောင့် ပြည်နယ်အတွင်းမှာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်ဆောင်ထားတယ်လို့ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရက ပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့်(၂၀)
Moe MaKa News , 13May 2013 —- (ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်၊ အတွဲ ၃၊ အမှတ် ၁၄၄၊ မေလ ၉ ရက်၊ ၂၀၁၃၊ စာမျက်နှာ ၁၈/၃၂) အပိုင်း (၂၀) လွှတ်တော်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၃ ရက်နေ့မှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ အမိန့်နဲ့ အကျဉ်းသူအကျဉ်းသား ၉၃ ယောက်ကို အကျဉ်းထောင်များကနေ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးပြီး ပြန်လွှတ်လိုက်ပါတယ်၊ အဲဒီ ၉၃ ယောက်ထဲမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၅၉ ယောက်ပါဝင်တယ်လို့လဲ သိရပါတယ်၊ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား (နိုင်/ကျဉ်း) များအတွက် ဝမ်းသာကြည်နူးရပြီး ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ နိုင်/ကျဉ်းများလဲ အမြန်ဆုံးပြန်လည်လွတ်မြောက်ကြဖို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်၊ ပြည်သူလူထုရဲ့ အကျိုးစီးပွါးအတွက် နိုင်ငံရေးစနစ်ကို [...]
ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင် – သမ္မတကြီး တောသွား တောင်သွား၊ လယ်သမားတွေကို တနပ်စားခိုင်းမယ် မထင်
Moe MaKa News , 12May 2013 —- ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင်၏ ခေါင်းကြီးများ၊ မေ ၁၂၊ ၂၀၁၃ (ဒီလှိုင်း ဂျာနယ်နှင့် ဖေ့စ်ဘွတ်ကနေ ကူးယူတင်ဆက်ပါတယ်) သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရ အတော်ကျွမ်းကျင်လိမ္မာ ရှိလာသဗျာ။ ဝမ်းသာတယ်ဗျာ။ သာဓုခေါ်စရာပေ့ါ။
နေအိမ်ဖျက်ခံရသူတွေ သမ္မတကို ကြိုဆိုခွင့်မရ
RFA News, 12May 2013 — မန္တလေးမြို့မှာ ကျူးကျော်အိမ်ယာတွေအဖြစ် ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့ မြရည်နန္ဒာရပ်ကွက်က ဒေသခံ (၂၀) ကျော် ဟာ ဒီကနေ့ မန္တလေးကို ရောက်ရှိလာတဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကို ကြိုဆိုဖို့ အသွားအာဏာပိုင် တွေက လမ်းတ၀က်မှာ တားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ရခိုင် ပြည်နယ်မှာ လေဘေး ကာကွယ်ရေး အစီအစဉ်တွေစတင်
RFA News, 12May 2013 —- လာမယ့် မေလ ၁၆ ရက်နေ့မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောဒေသကို ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထား တဲ့ မဟာဆန် (Mahasen) အမည်ရ အင်အားပြင်း ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်း အန္တရာယ်ကြောင့် ဒီကနေ့က စတင်ပြီး မောင်တော မြို့မှာ ကယ်ဆယ်ရေး အစီအစဉ်တွေ စတင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
မဟာဆန်မုန်တိုင်း ရခိုင်မြောက်ပိုင်း ၀င်ရောက်နိုင်ဖွယ်ရှိ
VOA News, 12May 2013 —- အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအတွင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ One လို့ နာမည်ပေးထားတဲ့ အပူပိုင်း မုန်တိုင်းဟာ အခုအခါမှာ ပိုအားကောင်း လာနေပြီး “မဟာဆန်” ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် မုန်တိုင်းလမ်းကြောင်း ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ဘက် ကမ်းရိုးတန်း ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း နဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဘက်ကို ကွေ့ပြီး ဦးတည် တိုက်ခတ်လာနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့ အနေအထားကို ချဉ်းကပ်လာနေပြီလို့ မိုးလေဝသပညာရှင်တွေ က ခန့်မှန်းပါတယ်။ ရခိုင်ဒေသခံ အာဏာပိုင်တွေဘက်ကလည်း အရေးပေါ် ကူညီကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေကို အသင့် အနေအထားမှာ ပြင်ဆင် ထားကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို မဆုမွန်က တင်ပြထားပါတယ်။ မီဒီယာ အသံ မဟာဆန်မုန်တိုင်း နားဆင်ရန် [...]
VOA News, 11May 2013 —- (မျက်မှောက်ရေးရာ/သတင်းသုံးသပ်ချက်) ကချင်ပြည်နယ်မှာ စစ်ဖြစ်တာ (၂) နှစ်နီးပါးရှိပေမယ့် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရဟာ ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခံရေပါတယ်။ ပြုပြင်ရေးကိုဆက်လုပ်ဖို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အသိုင်းအဝိုင်းက ထောက်ခံအားပေးကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ မနိုင်မနင်းဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ ကချင်ပြည်နယ်က ပဋိပက္ခဟာ အထင်ရှားဆုံးပါ။ ဒီအကြောင်းကို နယ်သာလန်အခြေစိုက် Transnational Institute က လွန်ခဲ့တဲ့ မတ်လက The Kachin Crisis စာတမ်းကို ထုတ်ဝေပါတယ်။ (၁၇) နှစ်လုံးလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲခဲ့ပြီးမှ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ တက်လာပြီး သုံးလအကြာမှာ တိုက်ပွဲတွေ ပြန်ဖြစ်ပါတယ်။
VOA News, 11May 2013 —- ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းထဲကနိုင်ငံတကာ အာကာသစခန်းရဲ့ ဓာတ်ခွဲခန်းကနေ အမိုးနီးယား (ammonia) ဓာတ်ငွေ့ ယိုစိမ့်နေတာတွေ့ခဲ့ရတာကြောင့် အာကာသယာဉ်မှူးတွေ အရေးပေါ် အာကာသယာဉ် အပြင်ကိုထွက်ပြီး ဒါကို ပြန်ပြင်ဖို့ ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ သောကြာနေ့က တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ဒီယိုစိမ့်မှုဟာ စိုးရိမ်စရာအခြေအနေ ဖြစ်ပေမဲ့ အာကာသယာဉ်မှူး ၆ ဦးက ဒီအခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ထားနိုင်တယ်လို့ အာကာသစခန်း အကြီးအကဲ ကနေဒါနိုင်ငံသား Chris Hadfield က ပြောပါတယ်။ ဒီယိုစိမ့်မှု ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲ ဆိုတာနဲ့ ဒီယိုစိမ့်မှုကို ပြန်ပြင်နိုင်ဖို့အတွက် အမေရိကန် အာကာသယာဉ်မှူးနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Chris Cassidy နဲ့ Tom Marshburn တို့ အာကာသယာဉ်ထဲက ထွက်ပြီး စစ်ဆေးဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ အကြောင်း Chris [...]
လေထဲ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ပါဝင်မှု မြင့်မားနေ
BBC News, 10May 2013 — လေထုထဲမှာ ကာဗွန်ဒိုင် အောက်ဆိုက်ဒ် ပါဝင်မှုဟာ သိသိသာသာမြင့်မားနေပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးမှုတွေထဲကမှာ အရေးကြီးတဲ့ အကြောင်းတချက်ဖြစ်တဲ့ C-O-2 လယ်ဗယ်ဟာ နေ့စဉ် တိုင်းထွာချက်အရ ၄ဝဝ ပီပီအမ်ကို ရောက်ရှိနေတာ ဖြစ်ပြီး လူ့သမိုင်းမှာ ဒါဟာ ပထမဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
ပြိုကျ စက်ရုံအောက် ပိတ်မိနေသူကို ကယ်တင်နိုင်
BBC News, 10May 2013 — ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၇ ရက်က ပြိုကျ ခဲ့တဲ့ အဆောက် အဦ အောက်မှာ အသက် မသေဘဲ ပိတ်မိ နေသူ တစ်ယောက်ကို ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်သား တွေက ကယ်တင် နိုင်ခဲ့ ပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် စက်ရုံအပြိုအပျက်ထဲ အသက်ရှင်နေသူတဦး
VOA News, 10May 2013 — ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၇ ရက်တုန်းက ပြိုကျခဲ့တဲ့ အထည်ချုပ်စက်ရုံ အဆောက်အဦးပျက်တွေ အောက်မှာ အမျိုးသမီးတဦးကို အသက်ရှင်လျက် ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းတွေ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အထည်ချုပ်စက်ရုံ အများအပြားတည်ရှိရာ အဆောက်အဦး ပြိုကျသွားခဲ့ရာက သေဆုံးသူ အရေအတွက်ဟာလည်း တစ်ထောင်ကျော်သွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒက္ကား အထည်ချုပ်စက်ရုံ အပျက်အစီးကြားမှ နောက်ထပ် အလောင်း ၁၂၀တွေ့ရှိ၊ သေဆုံးသူ ၉၉၆ ဦးရှိသွားပြီ
နိရဉ္စရာသတင်းဌာန. ၁၀ရက်နေ့ မေလ ၂၀၁၃ —- မေလ (၉) ရက် ယမန်နေ့ တစ်နေ့တည်းတွင် ဒက္ကားမြို့ အထည်အချုပ်စက်ရုံ အပျက်အစီးများ ကြားထဲမှ သေဆုံးသူ အလောင်း ၁၂၀ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သဖြင့် သေဆုံးသူ အရေအတွက်မှာ ယခုအခါ ၉၉၆ ဦး ရှိသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
VOA News, 11May 2013 — ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာ ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပခင် တရက်အလိုမှာ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ခဲ့တာကြော င့် လူ ၄ ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးပြီး ၁၈ ယောက် ဒဏ်ရာရသွားပါတယ်။ တာလီဘန်တွေ နဲ့ အယ်လ်ခိုင်းဒါးတွေရဲ့ အမာခံနယ်မြေဖြစ်တဲ့ မြောက်ဝါဇီရစ္စတန်ပြည်နယ်က နိုင်ငံရေးပါတီရုံးတခုနားမှာ သောကြာနေ့က ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် လူ ၄ ယောက် သေဆုံးသွားခဲ့တာပါ။
BBC News, 10May 2013 — ပါကစ္စတန် အမျိုးသားလွှတ်တော်နဲ့ ပြည်နယ် ၄ခုကဥပဒေပြု လွှတ်တော်အတွက် မဲပေးမယ့် လူပေါင်း ၈၆သန်း မှတ်ပုံတင်ထားပါတယ်။ မဲဆန္ဒရှင်အချို့က တာလီဘန်တွေဘက်က နောက်ထပ် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှာ ကိုကြောက်လို့ မဲမပေးဝံ့ဘူးလို့ ဆိုနေကြပါတယ်။ အစ္စလမ် ဘာသာရေးနဲ့ မကိုက်ညီဘူးဆိုပြီး မဲဆွယ်ပွဲကာလ အတွင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက် သူတို့လုပ်တာလို့ တာလီဘန်ဘက်က ပြောပါတယ်။ ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်း လူရာချီပြီးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
«123456789101112...219» English Version
Recent News	တရုတ် အိန္ဒိယ ဆက်ဆံရေး ရှေ့အလားအလာ
တရုတ် သမ္မတသစ်ကို အိုဘားမား နောက်လ တွေ့မယ်
မီဒီယာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အကြိတ် အနယ် ဆွေးနွေး
တော်ဝင်အလုပ်သမားများ လွတ်မြောက်ရေး သတင်းစာ ရှင်းလင်း
ဝမ်ဟောင်ဟန်း အထည်ချုပ်စက်ရုံ အလုပ်သမားများ လုပ်ခလစာ တိုးမြှင့်ရေး ဆက်လက်ဆန္ဒပြ